Inkolo yesiko lwamaZulu
Kuwo wonke umlando weZulu, akuzange kube nhlobo isici sokuphila komdabu waseZulu lapho inkolo ingakaze ihlanganyele khona: empini, emikhosini, ezimeni ezahlukene kanye nasezinkingeni ezimpilweni zabantu, kwezolimo kanye nenhlalakahle yezomnotho nokunye.
Ngaso sonke isikhathi, okhokho babhekwa njengomthombo lapho usizo kanye nesiqondiso kungatholakala ngemuva kokubuyisana okufanelekile ngeminikelo yokunikela. Ngaphandle kwenhlonipho abonisa okhokho babo, uZulu naye wayekholelwa ukuthi ungumuntu ongaphezu kukaNkulunkulu, u-Unkulunkulu, 'ovela embhedeni wamhlanga' futhi owadala zonke izilwane zasendle, izinkomo nomdlalo, izinyoka nezinyoni, amanzi nezintaba, njengoba kanye nelanga nenyanga.
Ngokusho kwezinkolelo zesiZulu, abantu banomzimba (umzimba) nomoya noma umphefumulo (idlozi). Ngaphezu kwalokho, kunenhliziyo (inhliziyo noma imizwa), ingqondo (ubuchopho, ingqondo, ukuqonda) kanye nomfanekiso (isithunzi, ubuntu). AmaZulu akholelwa ukuthi lo mfanekiso uba umoya wokhokho emva kokufa, kodwa ngemuva kokuba umkhosi wokubuyisela usuyenziwe, lapho umoya 'ubuyiselwa ekhaya'.
Umhlatshelo udlala indima ebalulekile ekugcineni ukuxhumana nemimoya yamakhosi, ukunikeza 'ibhuloho' eyenza umuntu ukuba acele umusa noma ukubonga imimoya yamademoni ngezibusiso zabo. Imimoya ye-Ancestral ikholakala ukuthi inamandla okulawula amandla emvelo futhi iyakhululwa ngaphambi kwazo zonke izenzakalo ezibalulekile.
IsiZulu sihlukanisa amakilasi amabili okudela. Ukubonga (kubonga) kwenzeka lapho kukhona okuhle okukhona, njengokungathi umfana ufinyelela ekukhuleni, lapho kunokudla okuningi, noma lapho ukuphila ku-umuzi sekuhambe kahle futhi kube nokugula okuncane.
Ukukhulumisana, umhlatshelo wokudabuka, kwenzeka lapho abantu baseMuzi befa ngokungalindelekile, noma lapho izinto zibonakala zingalungile futhi umuntu ezwa sengathi uyashushiswa. Yonke imihlatshelo, evame izinkomo noma izimbuzi, yenziwa ngokulandela imikhosi kanye nokugcinwa okuqinile kwenqubo kanye neprotocol, ngoba, uma lezi zingalandelwa, umhlatshelo awukwazi ukuletha kuphela izinzuzo, kodwa kungabangela ngisho nokulimaza.
Phakathi nekhulu le-20, iningi labafundisi bezenkolo baye baba ngamalungu eminye amabandla azimele, afuna ukuhlanganisa umkhuba wamaKristu ngokuhlonipha okhokho. Omunye wabo, i-Ibandla lamaNazaretha, uyathandwa kakhulu emaphandleni aseZulu.
Eyasungulwa ngo-1911 ngu-Isaya Shembe, eyaziwayo ngeqokithi njengesikole saseShembe, Indlunkulu yalesi sonto i-Inanda emaphethelweni eThekwini, kodwa inabalandeli abaningi emiphakathini yasemaphandleni, abagqoke izingubo ezihlukahlukene zezintambo, futhi ngubani okhonza ngengoma futhi udansa.